Cabbirka waa muhiim haddii aan jeclaan lahayn inaan qirno iyo in kale. In kasta oo aanan ahayn taageere ugu weyn ee inbadan oo ka mid ah shabakadahaas, sida aan u arko isdhexgalkeyga - aaladaha ugu waaweyn ayaa ah halka aan ku qaato waqtigeyga ugu badan. Caannimada ayaa wada kaqeybgalka, markaan rabo inaan gaaro shabakadeyda bulshada ee jira waa goobaha caanka ah ee aan ku gaari karo. U fiirso in aan iri jira. Marnaba kula talin maayo macmiil ama qof inuu iska indho tiro
Wow… si fiican loo fahmo sida baraha bulshada ay u saameynayaan warshadaha ganacsiga, Dukaan soo saar xogta la falanqeeyay ee 37 milyan oo booqashooyin baraha bulshada ah taasoo horseeday 529,000 amar Waa kuwan qaar ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee ka soo baxa macluumaadka ay wadaagaan: Ku dhowaad saddex-meelood laba meel oo ka mid ah dhammaan booqashooyinka warbaahinta bulshada ee dukaamada Shopify waxay ka yimaadaan Facebook. Celcelis ahaan 85% dhammaan amarrada ka yimaada baraha bulshada waxay ka yimaadaan Facebook. Amarada ka imanaya Reddit ayaa kordhay 152% sanadka 2013. Polyvore wuxuu soo saaray amarka celceliska ugu sareeya
Ragga iyo Haweenka wax ku iibsiga khadka tooska ah
Ayaa jecel fikradaha jinsiga? Waan sameeyaa… Waan sameeyaa… badanaa maxaa yeelay wax kasta oo ka hadlaya cirro, rag buuran oo furiinka ah ee afartameeyadoodu ku jiraan qaab nololeedkayga. Waxaan ahay ugaadhsade caadi ah markay timaado wax iibsiga… Waan doonayaa, waan helayaa, halkaas ayaan uga baxayaa. Baadhitaankaygu wuxuu bilaabmaa sida caadiga ah ka dib markaan furo sanduuqa oo aan ogaado inaan iibsaday wax aanan u baahnayn, rabin, ama fahmin. Waxaan ahay aabe keligiis ah oo la nool 40